Wafti ka socda barlamaanka Puntland oo galay sawirro hadal hayn abuuray kadibna u dhoofay Baydhabo & ujeedka socdaalkooda
Wafti uu hoggaaminayo guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdicasiis Cabdullahi Cisman ayaa galabta safar ugu ambabaxay magaalada Baydhabo oo xarun kumeel gaar ah u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Waftigaan waxaa u jeedada socdaalkooda lagu sheegay ka qaybgalka furitaanka kal-fadhiga 2aad ee golaha wakiillada dawladda Koonfur-Galbeed Soomaaliya oo dhowaan ka furmi doona magaalada Baydhabo.
Guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee barlamaanka Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame, Xildhibaano, Xoghayaha Guud ee Golaha Wakiillada iyo Saraakiil ka tirsan Baarlamaanka ayaa waftigaan ku sagootiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe.
Waftigaan ayaa waxaa inta aysan ka duulin magaalada Garoowe ay galeen sawirro hadal hayn ka abuuray baraha bulshada, kadib markii ay sawirro iska qaadeen mar ay u socdeen garbo siman isla markaana lagu baahiyey page-ka facebook ee barlamaanka.
Bintti-girl… ma baarlamaan ayay leedahay…. yaaaaab
Afxumad haddii aaden joojin waxaan ka bixin doonaa farada ku taabin doontah
Kkkkkkk dad wafti ah socda inta sawir laga qaaday ayaa ceeb laga dhigayaa, ninkaan cuqdadda dilootay ee waashay waa ineey reer puntland u gurmadaan haddii aan cudurkaan laga daweyn wuu u dhimmanayaa ee halloo naxariisto oo mar uun hallaga neefiyo dhibaatada haysata
Shuuke ahmed says:
Mubarik yusuf binti grl ma waxaa ulajedaha garaad binti grlka saxdheer sas ma ulajedaha